30 Days/Dae/Izinsuku — Civil Society Prison Reform Initiative
CSPRI 30 Days/Dae/Izinsuku
MARCH 2013 In this issue:Prison conditionsSentencing and paroleCorruption and GovernanceRehabilitation News from other African countries Download this issue
"30 Days/Dae/Izinsuku" covers domestic and major international media reporting on prison related issues sourced from press reviews, newspapers and websites
30 Days/Dae/Izinsuku April 2013
This edition of 30 Days covers news items from April 2013, covering prison conditions, sentencing and parole, corruption and governance, rehabilitation, and other African countries. 30 Days/Dae/Izinsuku March 2013
This edition of 30 days covers news items from March 2013, covering prison conditions, sentencing and parole, corruption and governance, rehabiliation, and news from other African countries. 30 Days/Dae/Izinsuku December February 2013
This edition of 30 days covers news items from February 2013, covering prison conditions, sentencing and parole, unsentenced prisoners, and news from other African countries. 30 Days/Dae/Izinsuku December 2012 / January 2013
This edition of 30 days covers news items from December 2012 and January 2013, covering prison conditions, escapes, unsentenced prisoners, South Africans imprisoned abroad, and news from other African countries. 30 Days/Dae/Izinsuku November 2012
This edition of 30 Days/Dae/Izinsuku covers news items reported during November 2012 on prison conditions, rehabilitation, unsentenced prisoners, sentencing and parole and South African prisoners abroad. 30 Days/Dae/Izinsuku October 2012
This edition of 30 Days/Dae/Izinsuku covers news items from October 2012 on governance and corruption, parole and sentencing, prison conditions, unsentenced prisoners and rehabilitation, as well as prison related news from other African countries. 30 Days/Dae/Izinsuku September 2012
This edition of 30 Days/Dae/Izinsuku covers news items from August 2012 on governance and corruption, prison conditions and escapes, as well as prison related news from other African countries. 30 Days/Dae/Izinsuku August 2012
This edition of 30 Days/Dae/Izinsuku covers news items from August 2012 on governance and corruption, parole and sentencing, prison conditions, South Africans imprisoned abroad and rehabilitation, as well as prison related news from other African countries. 30 Days/Dae/Izinsuku July 2012
This edition of 30 Days/Dae/Izinsuku covers news items from July 2012 on governance and corruption, parole and sentencing, extraditions, prison conditions, South Africans imprisoned abroad and rehabilitation, as well as prison related news from other African countries. 30 Days/Dae/Izinsuku June 2012
This edition of 30 Days/Dae/Izinsuku covers news items from June 2012 on governance and corruption, parole and sentencing, unsentenced prisoners, prison conditions, South Africans imprisoned abroad, rehabilitation, as well as prison related news from other African countries. 30 Days/Dae/Izinsuku - May 2012
This month's edition of 30 Days/Dae/Izinsuku covers issues of governance and corruption, sentencing and parole, prison conditions, South Africans imprisoned abroad, as well as prison related news from other African countries. 30 Days/Dae/Izinsuku April 2012
This month's edition of 30 Days/Dae/Izinsuku covers issues of governance and corruption, sentencing and parole, prison conditions, unsentenced prisoners, South Africans imprisoned abroad, as well as prison related news from other African countries. Next
-- CSPRI 30 Days/Dae/Izinsuku
-- CSPRI Newsletter